दसैं सुरक्षा : देशभर ४८ हजार ८ सय प्रहरी परिचालन - Ratopress::रातो प्रेस
काठमाडौं : तपाईं दसैंमा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ ? तपाईंको घर वा डेराको सुरक्षामा शंका छ ? यदि त्यस्तो लाग्छ भने तपाईंले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिएर जानुहोला । तपाईंको घर वा डेराको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले गर्छ ।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ३ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ७ हजार ८ सय २५ जना, कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार ७ सय १७ जना र सुदूरपश्चिममा ५ हजार ५० प्रहरी परिचालन गरिएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।